Serviced apartment for sale in Myanmar | ShweProperty.com
ဘေးဘက် ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်ပါသည်။ သံပန်း Sunshade ပါသည်။ ရေပူရေအေးစက်လဲပါသည်။...
ဘေးဘက် ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်ပါသည်။ သံပန်း Sunshade ပါသည်။ ရေပူရေအေးစက်လဲပါသည်။
U Ko Ko Kyaw
Advertiser : U Ko Ko Kyaw
Phone no : 09793800588
Condo For Sale in Dagon
မြောက်/ဒဂုံ၊ ဗိုလ်မင်းရောင်အိမ်ရာဝင်း၊ (အ၀င်မိန်းလမ်းမပေါ်)တွင် (600Sqft)အကျယ်ရှိ ပထမထပ်၊ ထောင့်ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ ဧည့်ခန်း။…...
မြောက်/ဒဂုံ၊ ဗိုလ်မင်းရောင်အိမ်ရာဝင်း၊ (အ၀င်မိန်းလမ်းမပေါ်)တွင် (600Sqft)အကျယ်ရှိ ပထမထပ်၊ ထောင့်ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ ဧည့်ခန်း။…
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာယံရိပ်သာ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းကျောကပ်တွင် (60x80)အကျယ်ရှိ ဂရန်အမည်ပေါက်၊ 2BN (နှစ်ထပ်အိမ်)၊ 1RC (တစ်ထပ်တိုက်၊…...
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာယံရိပ်သာ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းကျောကပ်တွင် (60x80)အကျယ်ရှိ ဂရန်အမည်ပေါက်၊ 2BN (နှစ်ထပ်အိမ်)၊ 1RC (တစ်ထပ်တိုက်၊…
Asking Price : 9,800 Lakhs
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဘောက်ထော်လမ်းသန့်တွင် (65x50)အကျယ်ရှိ မြေပိုင်မြေ၊ 2RC်(နှစ်ထပ်တိုက်)၊ MBR2, BR2, A/C4, ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…...
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဘောက်ထော်လမ်းသန့်တွင် (65x50)အကျယ်ရှိ မြေပိုင်မြေ၊ 2RC်(နှစ်ထပ်တိုက်)၊ MBR2, BR2, A/C4, ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် သိန်း - 3300 ( ညှိနှိုင်း ) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 32 ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီး…...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် သိန်း - 3300 ( ညှိနှိုင်း ) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 32 ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီး…
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် သိန်း - 3600 မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 34 စံပြသစ်ေ​တာရပ်​ကွက်​ ဘေလီတံတားအနီး…...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် သိန်း - 3600 မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 34 စံပြသစ်ေ​တာရပ်​ကွက်​ ဘေလီတံတားအနီး…
*Location – Awbar Street, Tamwe Township. *Price – 860 Lakhs *Property Type — Apartment(3F) *Area — 1080 sqft *Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, 2-Air Con, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Laminate, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township....
*Location – Awbar Street, Tamwe Township. *Price – 860 Lakhs *Property Type — Apartment(3F) *Area — 1080 sqft *Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, 2-Air Con, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Laminate, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township.
Awbar Street (သြဘာလမ်း)
Apartment for sale in Kyee Min Daing Township, near Salin Football Field. Condo area - 1320 sqft, has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price - 800 Lakhs (Nego) Apartment Sale in Kyee Min Daing (ID-764) We can do negotiate on that Above mentioned…...
Apartment for sale in Kyee Min Daing Township, near Salin Football Field. Condo area - 1320 sqft, has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price - 800 Lakhs (Nego) Apartment Sale in Kyee Min Daing (ID-764) We can do negotiate on that Above mentioned…
Serviced Apartment for Sale in Myanmar Real Estate for Sale Properties for Sale
Serviced Apartment for Sale in Myanmar Serviced Apartment for Sale in Ayeyarwady Serviced Apartment for Sale in Bago Serviced Apartment for Sale in Kachin State
Serviced Apartment for Sale in Kayin State Serviced Apartment for Sale in Kayah State Serviced Apartment for Sale in Magway Serviced Apartment for Sale in Mon State
Serviced Apartment for Sale in Rakhine State Serviced Apartment for Sale in Shan State Serviced Apartment for Sale in Tanintharyi Serviced Apartment for Sale in Yangon
Serviced Apartment for Sale in Chin State Serviced Apartment for Sale in Mandalay Serviced Apartment for Sale in Sagaing Serviced Apartment for Sale in Naypyidaw